Guddoomiye Kuxigeennada Golaha Wakiillada Puntland oo la doortay – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan ayaa ku guuleystay Guddomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Wakiillada Puntland, kadib markii uu helay 38 cod Wareegga Labaad ee Doorashada Guddoomiye Kuxigeenka, islamarkaana uu Cabdicasiis Siciid Maxamuud (Gacamey), oo Wareeghii Labaad ee Doorashada ka helay 15 cod, ka tanaasulay tartanka sii galo Wareegga Saddexaad. Wareegga Labaad waxaa ku haray Cabdixamiid Cabdisalaan Ciise, helay 13 cod.
Doorashadan, oo Wareeggii Koowaad ay ku tartameen ilaa 6 musharrax, balse ay Wareegga Labaad u soo gudbeen 3 ka mid ahaa, ayuu Guddoomiyaha cusub ee Golaha Wakiillada Puntland, Dhoobo Daareed, sheegay sida ay u kala heleen codadka Wareegga Labaad ee Doorashada Guddoomiye Kuxigeenka Golaha, waxaana uu ku dhawaaway in Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan, oo helay 38 cod, uu ku guuleystay Doorashada, kadib markii musharrixii kula sii tartami lahaa Wareegga Saddexaad, Cabdicasiis Gacamey, uu tanaasulay.
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad, Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan, ayaa markii guushiisa la shaaciyey kadib, waxa uu u mahadceliyey Xildhibaannada Golaha, Martida iyo Korjoogtada Doorashada, waxaana uu intaa ku daray in uu si dhaw ula shaqeyn doono Guddoomiyaha ee cusub ee ku soo baxay doorshadii hore.
Xildhibaan Cabdicasiis Siciid Maxamuud (Gacamey) iyo Xildhibaan Cabdixamiid Cabdisalaan Ciise, oo ahaa musharrixiintii uu kula tartamay Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Wakiillada Puntland, ayaa u hambalyeeyey mudanaha uga guulesytay doorashada, waxaana ay balan qaadeen in ka xildhibaano ahaan ay la shaqeyn doonaan Guddoonka cusub ee Golaha.
Dhanka kale, Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa isaguna ku guuleystay Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Wakiillada Puntland, kadib markii uu Wareeggii Saddexaad tartan gaaray uu la galay 2 musharrax oo uu ku reebay Wareegga ugu dambeeya doorashada.
Doorashada kadib, Xubnaha ka qeybgalay Doorashada, Guddoonkii hore ee Golaha iyo Murshaxiinta tartamay ayaa ku tilmaamay doorashadan mid si xor ah u dhacday, waxayna u hambalyeeyeen Guddoonka cusub ee loo doortay Golaha Wakiillada Puntland.
Baarlamaanka Soomaaliya oo u Hambalyeeyey Guddoonka Cusub ee Wakiillada Puntland